December 2009 – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 16 December 2009 17 February 2010 Categories Information2 Comments on Compliments of the Season
MPH: Another Mahbubani’s Thoughts
အာရှ အရေးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ ထောင်စုနှစ်
အာရှအပတ်စဉ်၊ ၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ
ပြီးခဲ့တဲ့ ထောင်စုနှစ်ဟာ ဥရောပသားတို့ရဲ့ ပွဲပါ။ အဲဒီ့ထောင်စုနှစ်ဟာ ဥရောပသားတို့ရဲ့ ပြက္ခဒိန်တွေထဲမှာ အထင်ကရ အလှည့်အပြောင်းတစ်ရပ်ကို မှတ်သားလိုက်တဲ့ ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ အာရှသားတို့ရဲ့ ပွဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ပထမ ထောင်စုနှစ်ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ ၉၉၉ ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်တော့ ဥရောပ လူ့ဘောင်တွေဟာ အမှောင်ခေတ်ထဲမှာ ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင်နဲ့ နုံးခွေနေခဲ့ပါတယ်။ အနာဂတ်အတွက်လည်း ဘာဆို ဘာမှ မရေမရာ အနေအထားပါ။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယ ထောင်စုနှစ်မှာတော့ အဲဒီ့ လူ့ဘောင်တွေဟာ တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်လာလိုက်တာများ၊ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာပိုင်းမှာတင်မက စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးမှာပါ အမြင့်ဆုံးအထိ ရောက်သွားအောင် လူ့ယဉ်ကျေးမှုကြီး တစ်ရပ်လုံးကို ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ တကယ်လို့များ ဥရောပသာ အဲသလို မတိုးတက် မထွန်းကားခဲ့ဘူးဆိုရင် အာရှတိုက် အပါအဝင် လူသားမျိုးနွယ်စု တစ်ရပ်လုံးလိုလိုဟာ ကံကျွေးချ မြေရှင် ပဒေသရာဇ်စနစ်ခေတ်ရဲ့ နွံထဲမှာပဲ အိုးဒယ်နစ် နစ်နေလောက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မကြာသေးခင်က ပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ထောင်စုနှစ်ကို ဥရောပရဲ့ထောင်စုနှစ်လို့ပဲ ခေါ်ထိုက်ပါတယ်။ သည်သမိုင်းဝင် အချိန်၊ ထောင်စုနှစ် ကာလကို တပျော်တပါးကြီး ဝှဲချီးဆင်ဖို့အတွက်ဟာလည်း ဥရောပသားတွေနဲ့မှ အလွန် အင်မတန် ထိုက်တန်လှပါပေတယ်။
အာရှသားတွေအတွက်ကတော့ သည်အချိန်ဟာ ပြန်ပြောင်း စဉ်းစားရမယ့် အချိန်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်တုန်းကဆိုရင် အာရှ လူ့ဘောင်အတွက် အရာရာဟာ အကောင်းဘက်ကိုပဲ ဦးတည်နေခဲ့တယ်။ အနာဂတ်ဘဝအတွက်ကလည်း အပိုင်တွက်နိုင်နေသလိုပဲ။ တရုတ်ပြည်ကြီးဟာဆိုရင်လည်း “ဆွန်”မင်းဆက်ရဲ့ အသရေနဲ့ တင့်တယ်လို့။ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးနဲ့ အလုပ်အများဆုံး (အစည်ပင်ဆုံး) မြို့တစ်မြို့ဟာလည်း အင်ကာဝပ် ဆိုတဲ့ အရှေ့တောင် အာရှမှာ ပေါ် ထွန်းနေခဲ့တယ်။ အဲသလို ရေခံမြေခံကောင်းတွေကြားမှာ ရောက်နေပါလျက်ကနဲ့ အာရှ လူ့ဘောင်တွေဟာ ခြေချော်လက်ချော် ဖြစ်ကုန်တယ်။ သည်လိုနဲ့ ဒုတိယ ထောင်စုနှစ် တစ်ခုလုံးမှာ အာရှလူ့ဘောင်တွေဟာ အရေးနိမ့်ခဲ့ကြရပါတော့တယ်။
ခုချိန်ထိ တွက်ရင်တောင်မှ အာရှ လူ့ဘောင် အများအပြားအနက်က ဂျပန်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းကသာ ဥရောပကို ထက်ချပ်မကွာ လိုက်နိုင်နေတာပါ။
ကျွန်တော့်စာတွေရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တစ်ရပ်က အာရှသားတွေကို နှိုးဆော်ဖို့ပါပဲ။ သည်အချိန်ဟာ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ အရည်အသွေး အစစ်အမှန်များကို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာအောင်လုပ်ရင်းနဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ သဘောဆန္ဒတွေကိုလည်း ခါတိုင်းထက် ပိုပြီး လေးလေးနက်နက်နဲ့ ထင်ထင်ရှားရှား ပြသကြရမယ့် အချိန်ကို ရောက်လို့နေပြီဆိုတာကို နှိုးဆော်ချင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သာ ညီတူညာတူနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အာရှ လူ့ဘောင်တွေဟာ တခြားလူ့ဘောင်တွေထက် ကောင်းကောင်းကြီးကို သာသွားနိုင်ဦးမှာလည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကြာ မိန်းမောနေခဲ့ရာက လမ်း ထလျှောက်ဖို့ဆိုတာ အလွယ်လေးနဲ့တော့ ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အာရှသားတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ် ကျွန်တော်တို့ မထောက်မညှာ မေးခွန်းထုတ်ကြရမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုကျွန်တော် ရေးသားလိုက်တဲ့ အက်ဆေးရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တစ်ရပ်က အခုလို ထောင်စုသစ်ကို ပြောင်းနေတဲ့ ကာလမှာ အာရှသားတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ကိုယ်မိမိ ပြန်မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းများကို စူးစမ်းဖော်ထုတ်ကြည့်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အာရှသားတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ထောင်စုနှစ်မှာ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး အရေးနိမ့်ခဲ့ကြရတာတုံး?
အခုလာမယ့် ထောင်စုနှစ်မှာရော ကျွန်တော်တို့တွေ အလားတူ ဆက်လက် အရေးနိမ့်နေကြရဦးမှာပဲလား?
အခုလာမယ့် ထောင်စုနှစ်သစ်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ အောင်မြင်မှု ရဖို့အတွက် ဘယ်လို စိန်ခေါ်မှုမျိုးတွေကို ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားကြရမှာတုံး?
ထောင်စုနှစ်သစ်အတွက် အထူးထုတ် အာရှ အပတ်စဉ် စာစောင်အတွက် ရေးလိုက်တဲ့ သည်အက်ဆေးဟာ အာရှလူ့ဘောင်တွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အဓိက စိန်ခေါ်မှုတွေအနက်က အဖျဉ်းဆုံး သုံးခုကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ အားထုတ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
“အခုလို သမိုင်း တွင်ရစ်မယ့် ကာလ၊ တစ်ဖန် ပြန်လည်နိုးထလာတဲ့ ဘဝအသစ်နဲ့ အာရှဟာ ကြီးမားထွားကြိုင်းလာနေခိုက်မှာ ဥရောပရဲ့ အသာစီးရမှု ဟာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးကို အဆုံးသတ်နေတဲ့ကာလ၊ ပြီးတော့လည်း နှစ်ဆယ်ရာစုရဲ့ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကြီးဟာ အရှေ့နဲ့ အနောက်ကြားမှာ ဘက်ပေါင်းစုံက ပဋိပက္ခကြီး တစ်ရပ်အသွင်သာ ဆောင်နေခဲ့တာမို့ အနာဂတ်ဟာ ပစိဖိတ်ဆီကိုပဲ ဦးတည်လို့ နေပါတယ်။ နားလည်မှုတစ်ရပ်ဟာ အဲဒီ့ဒေသ အရောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် မလိုက်လို့ မရတော့ပါဘူး။”
၁၉၉၅ ခုနှစ်လောက်ဆီက အာရှအောင်မြင်ရေးဝါဒ ကြွေးကြော်သံလား။ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက သမိုင်းဆရာ ဝစ်(လ်) ဒျူရန့်(ထ်) ၁၉၃၅ခုနှစ်က ရေးခဲ့တဲ့ စာပါ။ သည်စာအရ အာရှတိုက်ဟာ အလားအလာ ကောင်းတဲ့ မြေဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာတောင့် ကြာပါပြီ။ သည်ကြားထဲကပဲ၊ အာရှဟာ နှစ်ဆယ်ရာစုရဲ့အစိတ်အပိုင်း အများဆုံးမှာ အရေးနိမ့်ခဲ့ရသလို ဒုတိယ ထောင်စုနှစ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အများအပြားမှာလည်း အရေးမလှ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပထမပိုင်းက ဥရောပ၊ နောက်ပိုင်းမှာ အမေရိကတို့က အောင်မြင် ထွန်းပေါက်မှုအရာမှာ ရှေ့တန်းကို တစ်ဟုန်ထိုး ရောက်ရှိသွားပြီး ကမ္ဘာကြီးကို နယ်ချဲ့သိမ်းသွင်းစိုးမိုးလို့၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို ခြယ်လှယ် ထိန်းချုပ်လို့ နေလိုက်ချိန်မှာ အာရှဟာ အရေးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ထောင်စုနှစ်ကို ကူးပြောင်းလိုက်ချိန်တုန်းကတော့ အခြေအနေက တခြားစီပါ။ တရုတ်ပြည်ဟာ“ဆွန်”မင်းဆက် လက်အောက်မှာ အထွဋ်အထိပ်သစ်များဆီ ဦးတည်ရောက်ရှိနေခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အစည်ပင်ဆုံး၊ အလုပ်အများဆုံး မြို့တစ်မြို့ဟာလည်း အရှေ့တောင်အာရှ “အင်ကာဝပ်”မှာ ပေါ်ပေါက်နေခဲ့တယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ အာရပ် လူ့ဘောင်တွေဟာဆိုရင်လည်း ပညာအရာမှာ ဥရောပရဲ့ ရှေ့ကနေ ပြေးနေခဲ့ပါတယ်။ သည့်နောက်မှာလည်း ရာစုနှစ်ပေါင်း သုံး၊ လေးခုလောက်အထိ ဆက်ပြီးတော့ အာရှဟာ ရှေ့ကနေ ပြေးနေခဲ့သေးတယ်။ အဲဒီ့နောက် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ငါးရာကာလပတ် တစ်ခုလုံးလောက်နီးနီးမှာတော့ အာရှသားတွေဟာ သင်ယူမှတ်သားတာကို ရပ်ချလိုက်ကြတယ်။
လာမယ့် ရာစုနှစ်မှာ အရေးမနိမ့်ချင်ကြဘူးဆိုရင်တော့ အာရှသားတွေအနေနဲ့ ရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာ စွန့်ပယ် ထားရစ်ခဲ့ကြတဲ့ သင်ယူ မှတ်သားမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို မဖြစ်မနေ ပြန်စကြမှ ဖြစ်ပေတော့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ အာရှသားတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ကို ရက်ရက်စက်စက် ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ လေ့လာ သုံးသပ်ကြရပေမယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အာရှသား အမြောက်အများဟာ ဥရောပသား လက်တစ်ဆုပ်စာလောက်ရဲ့ နယ်ချဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ဘာလို့ ခံလိုက်ကြရတာလဲ၊ ဘာတွေ မှားသွားခဲ့လို့လဲဆိုတာကို နားလည်မှဖြစ်မှာပါ။ သည့်နောက် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာကျတော့ ဘာတွေက မှန်သွားသလဲဆိုတာကိုလည်း သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြရဦးမှာပါပဲ။
လူအတော်များများကတော့ ဥရောပရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းကိုသာ အမှတ်ပေးချင်ကြပါလိမ့်မယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် ငါးခုအတွင်း သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာပိုင်းမှာ ဥရောပက လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တာကို ထောက်ပြချင်ကြပေလိမ့်မယ်။ လက်နက် အင်အားအရာမှာ သိပ်ကို သာနေလို့သာ အာရှ လူအုပ်ကြီးတွေကို ကောင်းကောင်း နှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း ဆိုချင်ကြပေမယ်။
ဒါပေမယ့် “အပျော့ထည်”ကို လစ်လျူရှုပြီး “အမာထည်” တစ်ခုတည်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အမှားကြီးမှားနိုင်ပါတယ်။ အာရှတိုက်အနေနဲ့ သင်ခန်းစာ အမှားတွေကို ယူလိုက်ခြင်းဟာ ဘာသင်ခန်းစာမှ မယူဘဲ နေတာထက်တောင် အများကြီး ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း သမိုင်းက ထောင်စုသစ်ဆီကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးဝင်သွားနေခိုက်မှာ သင်ခန်းစာ အမှန်တွေကို သင်ယူ မှတ်သားမိလိုက်ဖို့ဆိုတာဟာ အသက်တမျှ အရေးကြီးလှပါတယ်။
အပြောင်းအလဲရဲ့ အရှိန်အဟုန်ဟာ တရိပ်ရိပ် တိုးလို့နေတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အရည်အချင်း ပြည့်မီတဲ့ လူ့ဘောင်တွေဟာ ရှေ့ကို မြန်မြန် သွက်သွက် ခုန်ထွက်သွားကြတော့မယ်။ အဲလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ နောက်မှာ လဲကျ ကျန်ရစ်ခဲ့တော့မှာပါ။
လမ်းမှန်ကမ်းမှန် အပျော့ထည်ကို ရှာဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူလှပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ လူ့ဘောင်တွေ ရှိတာကိုး။ အကောင်းဆုံး လုပ်နည်း လုပ်ဟန်တွေကိုလည်း အတိုင်းသား မြင်နေရတာကိုး။ ဘာကြောင့် ပုံတူကူးမချနိုင်ရမှာလဲ? တကယ်တော့လည်း အာရှဟာ အမာထည်တွေကို ပုံတူ ကူးချခဲ့ကြရုံတောင် မကဘူး၊ ပိုကောင်းအောင်တောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ကြတာကလား။
သို့သော်လည်း အောင်မြင်နေတဲ့ လူ့ဘောင်တွေ ကိုယ်နှိုက်တောင်မှ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကို မီးထိုးပေးနေလေတဲ့ အပျော့ထည်အစစ်ရဲ့ သဘော သဘာဝကို နားလည်ကောင်းမှ နားလည်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ လူ့ဘောင်များကို ယောနီသော မနဿီကာယနဲ့ သူတို့ပေးနေကျ အကြံဉာဏ်က ရိုးရိုးစင်းစင်းလေးပါ။ အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်တွေကတော့ အများသဘောဆန္ဒနဲ့အညီ အုပ်ချုပ်ပုံ စနစ်နဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဈေးကွက်တွေပါပဲတဲ့။
သည်ကြားထဲကပဲ၊ အဓိက နိုင်ငံတော်ကြီးများအပါအဝင် တချို့ လူ့ဘောင်တွေဟာ အများသဘောဆန္ဒနဲ့အညီ အုပ်ချုပ်ပုံ စနစ်ဆီကို ရုတ်ခြည်း ပြောင်းလဲချလိုက်တဲ့အခါမှာ အချည်းအနှီး ဖြစ်ကုန်ကြရပါတယ်။ အလားတူပဲ၊ အဖွဲ့အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကွန်ရက် ကွန်ခြာတွေ နည်းလမ်းတကျ မရှိဘဲနဲ့ လွတ်လပ်ဈေးကွက်တွေကို ကြိုးစား အားထုတ်ကြည့်ကြတဲ့ လူ့ဘောင်များခမျာမှာလည်း အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရပြန်တယ်။ အများသဘော ဆန္ဒနဲ့အညီ အုပ်ချုပ်ပုံစနစ်နဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဈေးကွက်တွေဆိုတာများထက် အများကြီး နက်ရှိုင်းလေးနက်လှတဲ့ သဘောတရားအထွေထွေကသာ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ လူ့ဘောင်တွေရဲ့အောင်မြင် ထွန်းပေါက်မှုကို ရှင်းလင်းပြနိုင်မှာပါ။ အခု ဆောင်းပါးလို ခပ်တိုတို စာလေးတစ်ပုဒ်မျှနဲ့တော့ အဖြေတွေ အားလုံးကို ထုတ်ပြလို့ မရနိုင်စကောင်းပါဘူး။ သို့သော်လည်း အောင်မြင်မှုရဲ့ အပျော့ထည်ပိုင်းမှာ တွေ့ရနိုင်တဲ့ အဓိက သဘောတရား သုံးရပ်ကို သည်ဆောင်းပါး နဲ့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေလားခင်ဗျာ။
ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ “မယ်ရစ်တိုခရေစီ” (meritocracy) ဆိုတာ ပါပဲ။ [မြန်မာလိုပြန်ရင်တော့ “အရည်အသွေး ထက်မြက်သူများဖြင့် အုပ်ချုပ်ပုံ စနစ်”လို့ ဆိုရပါမယ်။ ဒါ မြန်မာပြန်သူရဲ့ စကားချပ်ပါ။]
၁၉ရာစုအတွင်း ဥရောပတိုက်မှာ အရင်းရှင်စနစ်က ကံကျွေးချ မြေရှင် ပဒေသရာဇ်စနစ်ကို ဖျက်ဆီးလိုက်ချိန်မှာ ဘုရင်စနစ်ကနေ “မယ်ရစ်တို ခရေစီ”စနစ်ဆီကို ဦးတည်ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ အရင်းရှင်စနစ်ဟာ သူ့မှာ ရှိရင်းစွဲ “ဖန်တီးအား ကောင်းလှတဲ့ ဖျက်လို ဖျက်ဆီးသဘော”နဲ့အတူ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားသစ်များကိုလည်း ဖန်တီး မွေးထုတ်လိုက်ပါတယ်။ သည်နေရာမှာ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ နည်းစနစ်နဲ့ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားဟောင်း မြေရှင်ပဒေသရာဇ်တွေ၊ မင်းစိုးရာဇာတွေကို သန့်ထုတ်လိုက်ပြီးသကာလ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားသစ်တွေ လက်လက် ထလာအောင်လည်း လုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အရင်းရှင် စနစ်ရော၊ ဒီမိုကရေစီဆိုတာပါ (အနောက်တိုင်း စိတ်နှလုံး အများအပြားထဲမှာတော့ သဘောတရားရေးအရ အလေးအမြတ်ထား ကိုးကွယ်စရာလို့ အောက်မေ့ပင် အောက်မေ့နေသေးကြလင့်ကစား) ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့ သဘော မဆောင်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ပါရမီရှင် အသစ်များ ပေါ်ထွန်းလာအောင် ဖန်တီးပေးရင်းနဲ့ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားဟောင်းတွေ အညှိမတွယ်၊ ချိုးမတက်အောင် ကာကွယ် တားဆီးရာမှာတော့ အရင်းရှင်စနစ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီက အချိန်ပြည့်လောက်နီးနီး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ ယန္တယားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ (အာရှ အရေးနိမ့်ရတဲ့အထဲမှာ ပါရမီရှင်သစ်တွေ ပေါ်မလာအောင် ချိုးနှိမ်ခဲ့တာနဲ့ အခွင့်ထူးခံဟောင်းတွေ အညှိတွယ်၊ ချိုးတက်လာအောင် ထားခဲ့တာတွေဟာ အဓိက အရင်းခံတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။) အာရှလူ့ဘောင် တစ်ခုချင်းစီအနေနဲ့က သူတို့ဆီမှာ ရှိတဲ့ အထက်ဆုံး ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေ ပေါ်ပေါက်လာဖို့၊ လန်းစွင့်ဖို့နဲ့ ဦးဆောင်မှုပေးဖို့သာ ကြည်ဖြူနိုင်မယ်ဆိုရင် အာရှတိုက်ကြီး တစ်တိုက်လုံးဟာ အပျံစား ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အစဉ်အလာ အရိုးစွဲ လူမှုရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေက အဲဒီ့ အပြောင်းအလဲကို ခုခံ တားဆီးနေကြပါတယ်။ သည်လိုနဲ့ အာရှသား ပါရမီရှင် အများအပြား ပြုန်းတီးကုန်တယ်။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြန့်ကျက်မှုသဘောဟာ ဒေသတွင်း မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့ရသမျှကို အောင်အောင်မြင်မြင် ကျော်လွှားသွားနိုင်ပါတယ်။ အာရှတစ်ခွင်မှာ စီးပွားရေး အင်အားစုသစ်တွေ အလျှိုလျှို ပေါ်ထွန်းလာပြီး ပါရမီရှင်တွေ ဟောတစ်ယောက်၊ ဟောတစ်ယောက် ပေါ်ထွက်လာနေပါပြီ။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသားပေါင်း ငါးသိန်းမှာ တစ်ဝက်က အာရှတိုက်သားတွေပါ။
အမေရိကန် တက္ကသိုလ်တွေဟာဆိုရင် အရည်အသွေး ထက်မြက်သူများကိုသာ ဦးစားပေးတဲ့အရာ “မယ်ရစ်တိုခရက်တစ်(ခ်) ဖြစ်ရာ”မှာ ဘယ် ပညာရေးစနစ်ကမှ မယှဉ်သာအောင်ကို ထိပ်ဆုံးက ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီ့ တက္ကသိုလ်တွေဆီက အာရှသားများရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကြောင့် အာရှဟာလည်း ကမ္ဘာကြီးနဲ့အညီ ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့ ပါရမီရှင်များ ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ပြဆိုနေပါတယ်။ အဲဒီ့ကျောင်းသားတွေထဲက အများစုကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ် ချက်ချင်း လက်ငင်း ပြန်လာကြမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လာကြမယ့်သူတွေလည်း တစ်ပုံတစ်ပင်ပါပဲ။
ထိုင်ဝမ်ရဲ့ အံ့ဖွယ်သရဲ စီးပွားရေး အောင်မြင်မှုကို အဲသလို ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်ပြန်လာကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေက တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပံ့ပိုးပေးခဲ့တာပါ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကွန်ပျူတာ အပျော့ထည် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံး အကြီးအကျယ် ထွန်းကားလာခဲ့တာဟာလည်း “ဦးနှောက်ယိုဖိတ်မှု”တွေ ကိုယ့်ပြည် ကိုယ်ပြန်လာခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ ဘဏ်တိုက်များနဲ့ အတိုင်ပင်ခံ လုပ်ငန်းများမှသည် တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်လျက် ရှိနေတဲ့ သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီများအထိ ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံပေါင်း များစွာမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၊ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးများဟာလည်း အာရှသား ပါရမီရှင်တွေကို ဖော်ထုတ် လေ့ကျင့်နေကြပါတယ်။ အဲဒီ့ အာရှသား ပါရမီရှင်များဟာ နှစ်ပရိစ္ဆေဒ ရှည်ကြာစွာ ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက် ဖြစ်လို့နေတဲ့ အာရှလူ့ဘောင်များကို ပြန်လည် ရှင်သန်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ကြလေတဲ့ အမြုတေကောင်းတွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယသဘောတရားကတော့ “ငြိမ်းချမ်းရေး”ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ တကယ်တော့ ဥရောပရဲ့ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှု အစိတ်အပိုင်း အတော်များများမှာ ပြတ်တစ်လှည့်၊ ငတ်တစ်လှည့် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာစစ်ကြီး နှစ်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး အားတွေ လျော့ခဲ့ရတယ်။ ဥရောပက အတော်ဆုံး ဉာဏ်ကြီးရှင်များဟာ ဉာဏ်မရှိတဲ့ စစ်ပွဲတွေထဲမှာ ကျဆုံးခဲ့ကြရတယ်။ အဲဒီ့ကမ္ဘာခြမ်းဟာ မုန်းတီးမှုတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေကို အပြီးတိုင် စွန့်လွှတ်ဖို့ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူခဲ့ကြရတယ်။
စိတ်ပိုင်းဘဝနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဘဝ ပတ်ဝန်းကျင် အပြောင်းအလဲများဟာ သည်စစ်ပွဲကြီး နှစ်ပွဲအတွက် ရိုးစင်း ရှင်းလင်းတဲ့ အဖြေပါပဲ။ နှစ်ဆယ်ရာစုရဲ့ ပထမ ရာစုဝက်မှာ စစ်ရေးနဲ့သာ ဩဇာ အာဏာကို ချဲ့ထွင်နိုင်မယ်လို့ မြင်နေကြတဲ့ မြေရှင် ပဒေသရာဇ် စိတ်ဓာတ် အကြွင်းအကျန်များက ဥရောပတစ်ခွင်မှာ တည်မြဲနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စစ်ပွဲအတွက် အသုံးပြုတဲ့ ကိရိယာ တန်ဆာပလာများက သူတို့ရဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်အားကို အကြီးအကျယ် တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ နျူကလီယာ လက်နက်များ ပေါ်ပေါက်လာကာ အဲဒီ့လက်နက်တွေကပဲ သူတို့ အထင်ကြီးလှတဲ့ စစ်ပွဲများကို အဆုံးသတ်သွားစေပါတော့တယ်။
အဓိကရ မူဝါဒ ချမှတ်သူများ အပါအဝင် တချို့သော အာရှသား ဉာဏ် ကြီးရှင်များကတော့ အခုထက်ထိ မြေရှင်ပဒေသရာဇ်ခေတ်မှာ တဝဲလည်လည် ဖြစ်နေဆဲပါ။ သူတို့တွေက နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဟာ ဘာအကျိုးအမြတ်မှ ထွက်လာမှာ မဟုတ်တဲ့ သုည ဆက်ဆံရေးလို့ မြင်နေကြတယ်။ သည်လိုလူတွေအနေနဲ့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ ဂျာမဏီနဲ့ ဂျပန်တို့ ပျော်ဝင် စီးဆင်းသွားခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာကို နားလည် မှတ်သားကြဖို့ လိုအပ်လို့ နေပါတယ်။ ဂျာမဏီနဲ့ ဂျပန်တို့ သိလိုက်တာက ဩဇာအာဏာနဲ့ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာမှုကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ရယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ။
အရှေ့အာရှ၊ တောင်အာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ အရှေ့မြောက်အာရှမှာ ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ခေတ်မီကမ္ဘာကြီးမှာ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ကြွယ်ဝ ချမ်းသာရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်လှမှန်း သဘောပေါက်လာကြမယ်ဆိုရင် အာရှတိုက်ရဲ့ နိုင်ငံရေး ရာသီဥတုဟာ ပိုလို့ တင့်မော သာယာပြီး နေလို့ ထိုင်လို့ ကောင်းနေမှာပါ။
စစ်ပွဲတွေဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ့် ပိုက်ဆံတွေကို အခြောက်တိုက် အလဟဿ ဖြစ်ကုန်စေသလို ပါရမီရှင်တွေကိုလည်း သေကြေ ပျက်စီးစေပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ အဲဒါနဲ့ ပြောင်းပြန်ပါ။ အဓိကရ အာရှနိုင်ငံကြီး နှစ်နိုင်ငံအတွင်း စစ်ဖြစ်ပြီး အာရှတိုက်မှာ စစ်ပွဲ တစ်ပွဲလောက်လေး ဖြစ်လိုက်ရုံနဲ့တင် အာရှတိုက်ဟာ တစ်ဆယ့်ကိုးရာစုနှစ်ဆီကို နောက်ပြန် ပြန်လိမ့်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကနေ့ နယ်မြေပြဿနာတွေ အားလုံးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုသာ မေးသင့်တယ်လို့ ဆိုခဲ့တဲ့ “တိန့်ရှောင်ဖိန်”ရဲ့ ဉာဏ်ပညာ အမြော်အမြင်ကို အာရှသားတွေအနေနဲ့ နာယူ မှတ်သားသင့်လှပါတယ်။
တတိယသဘောတရားကတော့ “တည်ကြည် ဖြောင့်မတ်မှု”ပါ။ သည်လို ပြောလိုက်တော့ ဖန်တစ်ရာ တေနေတဲ့ စကားဟုန်လို့ အောက်မေ့ချင်စရာပါ။ သို့ပေမယ့်လည်း သည်စကားလုံးဟာ အာရှတိုက်ရဲ့ ရှက်စရာ အကောင်းဆုံး သွင်ပြင် လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်နေလေတဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုဆီကို အာရုံ စိုက်လာကြလေအောင် ယဉ်ကျေးစွာ ဖော်ဆောင်ပေးနေတဲ့ စကားလုံးပါပဲ။
အောင်မြင်တဲ့ လူ့ဘောင်တွေမှာ အလုပ် လုပ်တဲ့ အခွင့်ထူးခံတွေ ရှိပါ တယ်။ အဲဒီ့ အခွင့်ထူးခံတွေဟာ သူတို့ရဲ့လူ့ဘောင်တွေဆီက ရယူဖို့ထက် အဲဒီ့ လူ့ဘောင်တွေကို ပေးဆပ်ဖို့ ပိုထက်သန်ကြသူတွေပါ။ မအောင်မြင်တဲ့ လူ့ဘောင်တွေမှာတော့ အကျင့်ပျက် ခြစားနေတဲ့ အခွင့်ထူးခံတွေသာ ရှိပါတယ်။ မြေရှင် ပဒေသရာဇ်ခေတ် သဘောထားများရဲ့ ရလဒ် တစ်ရပ်အနေနဲ့ အဲသလို အခွင့်ထူးခံတွေဟာ လူ့ဘောင်ရဲ့ ကပ်ပါးရပ်ပါးတွေအဖြစ် ရပ်တည်နေပင် နေကြလင့်ကစား ခိုင်ခိုင်မာမာ အမြစ်တွယ်နေကြတာလည်း အမှန်ပါပဲ။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဟာ အများသဘောဆန္ဒနဲ့အညီ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အာရှ လူ့ဘောင်တွေမှာရော အဲသလို မအုပ်ချုပ်တဲ့ အာရှလူ့ဘောင်တွေမှာပါ ရှိနေပါတယ်။ (ကမ္ဘာ့ တခြားအစိတ်အပိုင်းများမှာလည်း ရှိနေတာ အမှန်ပါ။)
အဲဒါကို အမြစ်ကနေ တွန်းလှန်နိုင်ဖို့အတွက် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဟာ အာရှ လူ့ဘောင်များထဲမှာ အခုထက် အဆများစွာ မြဲမြံခိုင်မာနေဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုဟာ အထောက်နဲ့ အထားနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ သက်သေထူဖို့ အင်မတန် ခက်လှတာမို့ မသိမသာလေးနဲ့ အင်မတန် ပျက်စီးသွားစေတဲ့ သဘောမျိုးကို ဆောင်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း လူထု လူတန်းစားတိုင်းကို အဆင့်တိုင်းမှာ ပျက်စီးသွားစေတာမျိုးပါ။ နောက်ပြီးတော့လည်း အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကြောင့် စီးပွားရေးသက်သက်ကိုသာ ထိခိုက်စေ တာမဟုတ်ပါဘူး။ လူမှုရေးရော၊ အသိစိတ်ဓာတ်ပိုင်းကိုပါ ထိခိုက် ပျက်စီးစေတာပါ။ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုကနေ အဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့ အထင်မကြီးတဲ့စိတ်ကို ပွားများလာစေပါတယ်။ အကျင့်ပျက်လို့ အဆိုးမြင်၊ အဆိုးမြင်တော့ အထင်မကြီး၊ အထင်မကြီးတော့ အကျင့်ပျက်နဲ့ သံသရာလည်နေတဲ့အတွက် အာရှလူ့ဘောင်တွေဟာ မြောင်းထဲက ပြန်ကို တက်မလာနိုင်အောင် ဖြစ်နေရပါတော့တယ်။ ဘယ်သူပဲ ရောက်လာလာ၊ ဘာမှ မပြောင်းတော့မယ့် အတူတူ၊ ပြောင်းအောင် ဘာလုပ်ဖို့ အပင်ပန်းခံ ကြိုးစားနေရမှာတုံးဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ဝင်ဖို့ လွယ်နေလေမင့်ကိုး။
သည်အချက်ဟာ အာရှသားတွေအဖို့ သဘောမတူချင်ပေမယ့်လည်း တူကိုတူရမယ့် အဆိုးတကာ့ အဆိုးဆုံး အမှန်တရားကို ညွှန်ပြလို့နေပါတယ်။ အဲဒီ့အမှန်တရားကတော့ အာရှ လူ့ဘောင်တွေ ခေတ်နောက်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တာဟာ နယ်ချဲ့စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ မယှဉ်သာတဲ့ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး အင်အားစုတွေကြောင့် နောက်ကျ ကျန်နေခဲ့ရတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ပြင်ပ အကြောင်းတရားတွေဟာ အပယိကတွေ၊ အဖျားအနားတွေပါ။ (ပြီးတော့ အင်မတန်လည်း ဒုက္ခပေးခဲလှပါတယ်။)
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ငါးရာကာလမှာ အာရှ လူ့ဘောင်တွေဟာ ဥရောပ လူ့ဘောင်တွေရဲ့နောက်မှာ ပြတ်ပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့ရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းခံ အစစ်အမှန်ကတော့ ရိုးလှစင်းလှပါတယ်။ အဲဒီ့အကြောင်းရင်းခံကတော့ အာရှသားတွေကသာ အာရှတိုက်ကို နောက်ပြန် ဆွဲနေခဲ့ကြလို့ပါပဲ။
ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့် ဆောင်းပါးကို အဆိုးမြင်တဲ့ မှတ်ချက်နဲ့ အဆုံးမသတ်ချင်ပါဘူး။ အပြောင်းအလဲအတွက် မျှော်လင့်ချက်က ရှိကို ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြန့်ကျက်မှုဟာ အာရှတိုက်မှာ အခွင့်ထူးခံသစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာအောင် ထုတ်လုပ်ပေးလို့ နေပါတယ်။ တရိပ်ရိပ် တိုးတက်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲ အရှိန်အဟုန်ကလည်း အလားတူပါပဲ။ အာရှသား အမြောက်အများဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာကိုယ်တင်မက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာပါ ပညာသင်ကြားနေကြပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြန့်ကျက် စီးဝင်နေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကလည်း အာရှသားတွေရဲ့ မျက်စိတွေကို ဖွင့်ပေးနေပါတယ်။ “မသိ သားဆိုးရွားမှု ခေါင်းမြီးခြုံ”ကိုလည်း လှပ်တင်နေကြပါပြီ။ သင်ယူမှတ်သားမှု လုပ်ငန်းစဉ်သစ်ကလည်း စတင်လို့ နေပါတယ်။ သည်အင်အားစုသစ်များဟာ အာရှလူ့ဘောင်များအတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များကို ဖန်တီးပေးကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အာရှလူ့ဘောင်တွေအနေနဲ့ ပထမဆုံး သင်ယူ မှတ်သားရမယ့် သင်ခန်းစာကတော့ “မယ်ရစ်တိုခရေစီ၊” “ငြိမ်းချမ်းရေး”နဲ့ “တည်ကြည် ဖြောင့်မတ်မှု”ဆိုတဲ့ လမ်းမှန် ကမ်းမှန် အပျော့ထည်ကို ဘယ်လို တိုးတက်အောင် လုပ်ပြီး၊ ဘယ်ပုံ အကောင်အထည် ဖော်ကြကာ ဘယ်နည်းနဲ့ အရှည် တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းကြမယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။ (အတိုကောက်ကတော့ MPH ပေါ့လေ။ MPH ဆိုတော့လည်း တစ်ဟုန်ထိုး ပြောင်းနေတဲ့ ကာလနဲ့ လိုက်ဖက်ညီစွာ အင်မတန် မှတ်လို့ ကောင်းတဲ့ စကားလုံးလေးပေပဲပေါ့။)
[သိုးဆောင်းဘာသာစကားနဲ့ ဆိုရင်တော့ Meritocracy ရယ်၊ Peace ရယ်၊ Honesty ရယ်ပေါ့။ အဲဒီ့ သုံးလုံးရဲ့ ထိပ်ဆုံး စာလုံးလေးတွေနဲ့ချည်း အတိုကောက် ယူလိုက်တဲ့အခါ MPH လို့ ရလာပါတယ်။ MPH ဟာ တစ် နာရီအတွင်းပေါက်တဲ့ ခရီးမိုင်နှုန်း (mile per hour)ရဲ့အတိုကောက်အဖြစ် လူသိများ ထင်ရှားလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် မူရင်းစာရေးသူက သူ့အတိုကောက ဟာလည်း တစ်ဟုန်ထိုး ပြောင်းလဲနေတဲ့ ခေတ်ကာလနဲ့ လျော်ညီတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒါ ဘာသာပြန်သူ့ စကားချပ်။]
စာမူခွင့်ပြုချက်အမှတ် ၁၃၆/၂၀၀၄ (၁၂)နဲ့ လက်တွဲဖော်စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေထားတဲ့ အတ္တကျော်ရဲ့ “အာရှသားများ စဉ်းစားနိုင်စေ” စာအုပ်ထဲက ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်တာပါ။ မူရင်းအက်ဆေးကို ရေးသားသူ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ခီရှိုး မာဘူဘာနီရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကိုတော့ ညာဘက်က ဝေေ၀ဆာဆာ ဖတ်စရာ အောက်မှာ ရှိလေတဲ့ “အာရှသားတွေ စဉ်းစားတတ်ကဲ့လား” အက်ဆေးအဆုံးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်က။
Author lettwebawPosted on2December 2009 17 February 2010 Categories Reproduction, TranslationLeaveacomment on MPH: Another Mahbubani’s Thoughts